प्रदेश १ मा दलित कोटाबाट नेकपा एमालेका खेम नेपाली निर्वाचित - Bagaicha.com
प्रदेश १ मा दलित कोटाबाट नेकपा एमालेका खेम नेपाली निर्वाचित भएका छन् । उनले ६ हजार २ सय ७० मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका विनकुमार विश्वकर्माको २ हजार ८ सय ३२ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
बगैचा सम्वाददाता २४ माघ २०७४, बुधबार १७:४७
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुन सुरु भएको छ । प्रदेश १ मा दलित कोटाबाट नेकपा एमालेका खेम नेपाली निर्वाचित भएका छन् । उनले ६ हजार २ सय ७० मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका विनकुमार विश्वकर्माको २ हजार ८ सय ३२ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । अपाङ्ग र अल्पसंख्यकबाट अगम प्रसाद बान्तवा राई विजयी भएका भएका छन् । उनले ६ हजार १ सय ३८ मत ल्याएर विजयी भएका हुन । १२ मत भने बदर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
हङकङ सरकारले पच्चिस अर्ब डलर बाड्ने
हङकङमा पाकिस्तानी माथी छुरा प्रहार
हङकङ सरकार द्वारा विदेशी घरेलु कामदारहरुलाई घर बाहिर नजान आग्रह
नेपालको स्याटलाइटले खिचेको फोटो सार्वजनिक……….
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद कालापानीमा लम्पसार……..
विष्णुकुमारको ‘यो जीवन’ सार्वजनिक
मज्जाको राईले बनाए प्रमिला राईको स्वरको म्युजिक भिडियो
गोप्य फाइल खोतल्दै सिआइबी……….
सीमाक्षेत्रमा फेरि भारतको हस्तक्षेप………
महिलाको भनाइ फेरियो, महरालाई सफाइ………..
अतिक्रमित जग्गामा सरकारको होर्डिङ–बोर्ड……..
१३ वर्षदेखि विद्यालयको १० बिघा जग्गा कब्जा…………